[फेस्ट २०२० पछाडि] समीक्षा: 'आर्चेनी' एक ग्रेटी टेक अन सुपरहीरोज र पूर्व महिमा - आईहोरर
घर हरर मनोरन्जन समाचार [फेस्ट २०२० पछाडि] समीक्षा: 'आर्चेनेमी' एक थोरै लिनुहोस् सुपरहीरो र पूर्व महिमा
हरर मनोरन्जन समाचारमनोवैज्ञानिक डर (थ्रिलर्स)
[फेस्ट २०२० पछाडि] समीक्षा: 'आर्चेनेमी' एक थोरै लिनुहोस् सुपरहीरो र पूर्व महिमा
by जेकब डेभिसन अक्टोबर 17, 2020
द्वारा लिखित जेकब डेभिसन अक्टोबर 17, 2020
विगतका धेरै वर्षहरूमा सुपर नायक विधा सिनेमा वा पप संस्कृतिको टेन्टपोल भयो, राम्रो वा खराबको लागि। त्यसो गर्दा, प्रमुख फ्रान्चाइजीहरू जस्तै यो Avengers, नौकर, माकुरा मानिस र यस्तै, हाइलिभ कमिक बुक रूपान्तरण बहु मिलियन डलर एक्स्ट्रावागान्जामा छ। तर अझै पनि त्यहाँ बिभिन्न प्रकारका कथाहरू छन् भन्नका निम्ति र धेरै जुन भुईंबाट भन्न सकिन्छ, आकाशको सट्टामा। जस्तै के भने यदि एक नायक आफ्नो शक्ति गुमाउँछ? त्यसोभए उनीहरू के गर्छन्? यो सेट अप छ कट्टर शत्रु.
अधिकतम मुट्ठी (जो मंगानिल्लो, साँचो रगत) ब्रह्माण्डको सबैभन्दा शक्तिशाली सुपरहीरो हो। कमसेकम, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अब, उहाँ घरबारविहीन मानिस हुनुहुन्छ र रक्सीले भव्यताको सम्भावित भ्रम र क्रोधको समस्याको साथ। ईंटको पर्खाल पंच गर्दै छ र भवनहरू पंच गर्न सक्षम हुन चाहेको जस्तो उसले दावी गर्दछ। ऊ ठूलो शहरमा उसको ध्यानमा रहन्छ, उसको बार्टेन्डरले हास्यास्पद बनाउँदछ र उपद्रव जस्तो व्यवहार गर्दछ जबसम्म ऊ वास्तवमा उसलाई सुन्न इच्छुक कसैलाई भेट्दैन। हम्स्टर (स्काईलन ब्रुक्स, सबैभन्दा गाढा दिमाग) एक स्थानीय भ्लगर र रिपोर्टर हो जुन ठूलो स्कूप खोज्दैछ, र उसले म्याक्ससँग आफ्नो मौका देख्दछ। यद्यपि उनीसँग सुपर नायकको मैक्स फिस्टको रमणीय कथाहरू र उसको गृह ब्रह्माण्डबाट उनको नराम्रो अर्चेनीको बारेमा आफ्नो शंका छ, ती कमसेकम मनोरन्जनका लागि बनाउनेछन्। तर उनलाई म्याक्सको मद्दत चाहिन्छ जब उनकी दिदी इंडिगो (Zolee Griggs, बिट) प्रबन्धक (ग्लेन होवर्टन, फिलाडेल्फियामा यो सँधै घामको हुन्छ) एक क्रुर अपराधी जसले आफ्नो चंगुलमा इंडिगो चाहान्छ। अब दाजुभाइहरूले अधिकतम मुट्ठीको साथ टोली बनाउनु पर्छ र पत्ता लगाउनुपर्दछ कि उसको अग्लो कथाहरू सत्य छन् कि ऊ पागल छ। वा हुनसक्छ दुबै?
IMDB मार्फत छवि
कट्टर शत्रु लेखक / निर्देशक एडम इजिप्ट मोर्टिमरबाट आएका हुन्, जसले हामीलाई २०१० को दिमाग र बडीब्यान्डिंग डरावनी फिल्म दिए डानियल वास्तविक छैन. धेरै आफ्नो अन्तिम परियोजना जस्तै, उसले केहि बनाएको छ कि एक एकल शैली वा शैली मा बक्से जा रही परिभाषित। कट्टर शत्रु एक कार्य अपराध फिल्म हो, एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, एक सुपर नायक फिल्म टाउकोमा बदलियो। र यो राम्रो समय मा आउन सक्दैन। जबकि म यो भन्न सक्दिन कि मानिसहरू सुपर नायक फिल्महरूको बिरामी छन्, त्यहाँ थकान केही छ जुन उनीहरूका कथाहरूको सीमितताबाट खडा भइरहेको छ। र यो ती तीनैहरु मार्फत। अधिकतम मुट्ठीको सत्यता र भ्रमहरू हावामा राखिन्छन्, संकेतहरू र मोडहरू लगाएर दर्शकहरूले सोचेको सुपरको दाबीहरूको सत्यतामाथि प्रश्न उठाउन। तर तिनीहरूले श not्का गर्दैनन् कि उहाँ एक लडाई मशीन हुनुहुन्छ।
जो मंगानिल्लोले अधिकतमको रूपमा प्रदर्शनको नर्क दिन्छ। कल्पना गर्नुहोस् एक इम्बिटेड थोर वा सुपरम्यान आफ्नो पहिचान, शक्तिको हराउनु संग संघर्ष गर्दै। यदि ऊ बौलाहा हो भने पनि, तपाईं सहयोग गर्न सक्नुहुन्न तर मान्छेसँग सहानुभूति दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ, यदि त्यसले ईंटको पर्खालमा ठोसे पक्कै केही महसुस गर्न सक्छ र आफ्नो खोक्रो हातले मान्छेको खोपडी बस्ट गर्न सक्छ। तर फेरि, यो केवल आफ्नो प्रणाली मा सबै लागूपदार्थ र मदिरा को लागी धन्यवाद हुन सक्छ। स्काइलन ब्रूक्स र जोले ग्रिग्स आफ्नो अनावश्यक 'साईडकिक्स' को रूपमा उभिन सक्छन् यद्यपि उनीहरूसँग डेनरेन्ज्ड भन्दा राम्रो ज्ञान र तर्क छ। इण्डिगोको रूपमा जोलीले अकथनीय चालाकी देखाउँछिन् र एक्लोपना पनि हुन्छन्, जब यस्तो परिस्थितिहरू उसको बिरूद्ध हुन्छन् र उनको टाउकोमा शाब्दिक बन्दुकको साथ गहन परिस्थितिमा राखिन्छन्। हम्स्टर एक उत्कृष्ट श्रोता सरोगेट हो र अधिकतम फिस्टको कथालाई समर्थन दिन्छ। ब्रह्माण्डमा उनको रहस्य र दैनिक दुनियासँगको उसको अन्तरक्रियामा परिप्रेक्ष्य प्रदान गर्दै। र ग्लेन होवर्टन मायालु प्रबन्धकको रूपमा पूर्ण विकसित खलनायकले चम्किन्छन्। एक धेरै खतरनाक र धेरै सजिलैसँग क्रोधित किंगपिनमा केही quirks थप्न।
युट्यूब मार्फत छवि
कार्य दृश्यहरू harrowing जब मैक्स फिस्ट सबै बाहिर जान्छ। पाइप, बन्दुक, वा केवल उसको लागी अटुट हातले होस्, म्याक्सले आफ्नो तरीकाले कसैबाट काका मीठ बनाउँदछ। विशेष गरी यदि ऊ अशक्त छ। र म्याक्सको विगत र सम्भावित भ्रमहरू अत्यन्तै रंगीन र अतिवादी कलाकार मोशन हास्य शैली अनुक्रम र रोटोस्कोपिंगको साथ कुशलतापूर्वक ह्यान्डल गरिएका छन्। अधिकतम को उत्पत्ति एक हास्य पुस्तक शैली कल्पना संसार हो, त्यसैले यो मात्र भावना राख्छ कि तिनीहरू अधिक प्रस्तुत छन्। यसले साइ-फाई पक्षहरू र अधिक म्युट र ड्रब यथार्थता बीचमा रोचक भिन्नता पनि सिर्जना गर्दछ। मैक्स आफैंमा फसेको भेट्टाइन्छ। प्लाटलाइन्स घुमाउँछ र सँगै घुम्छ, एक धेरै सन्तुलित फेसनमा कार्दै केही क्षणहरू थोरै तान्दा पनि।
म अनुभव गर्न पर्याप्त भाग्यशाली थियो कट्टर शत्रु फेसन २०२० पछाडि मिसन टिकी ड्राइभ-इनमा र यो एक ठूलो स्क्रिनमा एउटा विस्फोटन थियो। साथै, कास्ट एन्ड एड्स इजिप्ट मोर्टिमर र जो मंगानिल्लो सहित (उनको कुकुर, बुलबुले!), स्काइलेन ब्रूक्स, जोले ग्रिग्स र अन्य स्पेक्ट्रेभिसनका निर्माताहरू सहित फोटो-अप्स र परिचयका लागि लिजन एम कारमा उपस्थित थिए।
फोटो क्रेडिट लिसा ओ'कन्नर: निर्देशक / लेखक एडम इजिप्ट मोर्टिमर, जो मंगानिल्लो, कुकुर र एलिया वुड
कट्टर शत्रु यो मुटुको रेन्डि and र अनुहार पन्चिंगको जस्तो मनोरन्जनात्मक थियो। यद्यपि व्यक्तिहरूलाई अझै "म्याक्स फिस्ट" नाम थाहा छैन, तिनीहरू आशावादी छन् कि हम्स्टरको जस्तो लगानी हुनेछ।
कट्टर शत्रु डिसेम्बर ११, २०२० मा जारी हुने सेट गरिएको छ।
2020कार्यआदम मिस्र मोर्टिमरकट्टर शत्रुफेस्ट भन्दा परेग्लेन होवर्टनहररजो मंगानिल्लोसमीक्षासाइ-फाईSpectreVision
जेकब डेभिसन लस एन्जलस आधारित डरावनी लेखक, आई अन हॉरर सह-होस्ट, र सबै चीजहरूको प्रेमी हुन्। ऊ हेर्दा जति धेरै फिल्म संकलन गर्छ।
iHorror फिल्म फेस्टिवल २०२०: विजेताको पूर्ण सूची हेर्नुहोस्!
'GI Joe: आपरेशन ब्ल्याकआउट' असफल मिशन हो
आइस नाइन किल्सले 'स्टेसीको आमा' लाई कभर गर्दछ ...
साक्षात्कार: डाना गोल्डको साथ 'योजना Plan' कार्यान्वयन गर्दै र ...
'The Djinn' थिएटरमा आउँदैछ, माग गरेको भिडियोमा ...
'Muppets प्रेतवाधित हवेली' डिज्नी + को लागि हेलोवीन विशेष सेट
क्याटोरिजहरू ब्राउज गर्नुहोस् श्रेणी चयन गर्नुहोस् अमेजन (चलचित्र) ()) अमेजन (श्रृंखला) ()) AppleTV + (१) ब्लू रे (१) हास्य डर ()१) हास्य ()) फेसबुक (श्रृंखला) (१) कल्पना (२)) फुटेज भेटिए (२१) गोर (२२) HBO (चलचित्र) ()) HBO (श्रृंखला) ()) हरर पुस्तकहरू ()२) हरर मनोरन्जन समाचार (१०,१०10,464) हरर फिल्म (175०) हरर श्रृंखला (२२) हरर सबजेन्स (१) Hulu (श्रृंखला) ()) अन्तर्वार्ता (फिल्म) (२)) अन्तर्वार्ता (श्रृंखला) (१) LGBTQ हॉरर (२ 29) सूचि (चलचित्र) (२)) सूची (श्रृंखला) (१) बजार ()) दानव डर (ror) चलचित्र समीक्षा (११) चलचित्र ()) संगीत (२)) नेटफ्लिक्स (चलचित्र) ()) नेटफ्लिक्स (श्रृंखला) (१)) गैर-कल्पना (१) अलौकिक ()२) मनोवैज्ञानिक डर (थ्रिलर्स) ()०) श्रृंखला समीक्षा (१) Shudder (फिल्म) (२)) Shudder (श्रृंखला) ()) स्लाशर ()) अनौंठो र असामान्य ()०) स्ट्रीमि Movies चलचित्रहरू (१)) स्ट्रीमि Series श्रृंखला ()) खेलौना (१) ट्रेलर (फिल्म) () 134) ट्रेलर (श्रृंखला) (२)) साँचो अपराध () 41) भिडियो खेल (१ 165०) यूट्यूब (फिल्म) (२) यूट्यूब (श्रृंखला) (१०)